खुसीको खबर : संसारकै एक नंबर खुशी नेपाली ! « Gajureal
प्रकाशित मिति: १४ पुष २०७५, शनिबार ०३:४०
भौतिक जगतमा खुशी भन्नाले समृद्धि बुझिन्छ । प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा, सुलभ स्वाश्थ्य सेवा, निःशूल्क शिक्षा, सहज उपभोग्य सामाग्री, सम्पन्न वर्तमान, सुरक्षित भविश्य– खुशीको अन्तराष्ट्रीय आधार यिनैलाई मानिन्छ । तर, हामी नेपालीलाई खुसी हुन यति ठूला कुरै चाहिंदैन । खुशीका स–साना तरंग पनि हामी फुरुंग भैहाल्छौं ।
(तस्वीर : तानतुन डटकम)
‘होप्पी लाईफ फाउण्डेसन’ नामक एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको एक अनुसन्धानबाट यो अ–तथ्य बाहिर आएको छ । देशभरका साढे सातसय मानिसस“ग गरिएको कुराकानी, चियोचर्चो र फेसबुक पोष्टको अध्ययन-अनुमान गरेर प्रतिवेदन निकालिएको हो ।
पब्लिक बसमा चढ्ने यात्रुका अनुसार, सिटमा बस्न पाउनु सबैभन्दा ठूलो खुशी हो । त्यसैगरी गाडी चालकको दृष्टिकोणमा खुशी भनेको ट्राफिकले आमा चकारी गाली नगरी लाईसेन्स खोस्नु हो ।
भाडामा बस्ने सय जना डेरावालसँग गरिएको कुराकानीमा अधिकांसको जवाफ थियो, ‘समयमा दिसा पिसाब गर्न पाउनु खुसीको पराकष्टा हो ।’ सहभागी एक डेरावालले भनेका छन्, ‘घरबेटीले ट्वाइलेटको चाबी नलुकाएको दिन सबैभन्दा आनन्द लाउच ।’
मोटर साईकल चालकका नजरका फुल टेङ्कर ईन्धन पाउनु सबैभन्दा ठूलो खुशी हो । छ महिना अगाडीको पारिश्रमीक अहिले पाउँदा एउटा मजदुरलाई स्वर्गै जितेजस्तो लाग्छ । किसानले समयमा मल र बिउ लिन पाए भने उनिहरुभन्दा खुशी अर्को कोही हुँदैन ।
हामीहरु धाराबाट पानी आउँदा खुशी हुन्छौं । तारबाट बिजुली आउँदा खुशी हुन्छ । आश्वासन पाउँदा खुशी हुन्छौं । समृद्धिका कथा सुन्न पाउ“दा खुशी हुन्छौं । अभावको घाउ निको हुनै पर्दैन, ब्यथामा मल्हम लाग्दा पनि खुशी हुन्छौं ।
खुशीका अन्य आधार के के हुन्, त्यो तपाईं थप्दै गर्नोस् । अहिलेलाई विश्वका खुशी नागरिक मध्ये हामीलाई एक नंबरमा पार्न पहल पो गर्ने कि !!